Ndikhetha eyiphi xa ndirhoxisa ukubhukisha indawo ebendiza kuhlala kuyo ngenxa yecoronavirus (COVID-19)? - Indawo Yoncedo yeAirbnb
Eyona ndlela ifanelekileyo yokwazi ngakumbi ngeendlela zokurhoxisa nezokubhukisha onokukhetha kuzo, kukuqalisa inkqubo yokurhoxisa ukubhukisha kwakho. Xa uyiqalisile le nkqubo, uza kuboniswa izinto onokukhetha kuzo ngokusekelwe ekubeni ukubhukisha kwakho kuqukiwe ngokuzenzekelayo na kwipolisi yethu yemeko ongenakuyinceda. Ngokuxhomekeke kwiinkcukacha zakho zokubhukisha, unokukhetha ukucela ukurhoxisa kumbuki zindwendwe wakho uze ubuyiselwe yonke imali ungakhange umbhalele umyalezo ngokuthe ngqo.
Ukuba ukubhukisha kwakho akufaneleki phantsi kwepolisi yethu yeemeko ongenakuzinceda, ungajonga ukubhukisha kwakho ukuze ubone ukuba ungakhetha kwiindlela zokurhoxisa ezibhetyebhetye na. Ukuba zikhona, ungakhetha indlela eqhelekileyo yokutshintsha okanye kwiindlela zokurhoxa ezifumanekayo.
Ukucela ukurhoxa kumbuki zindwendwe wakho
Kuxhomekeke kwiinkcukacha zakho zokubhukisha, usenokukwazi ukucela ukurhoxa ngokuthe ngqo kumbuki zindwendwe wakho uze ubuyiselwe yonke imali. Uza kwazi ukuba uyakwazi na ukukhetha le ndlela xa uqalisa inkqubo yokurhoxa.
Yiya kuHambo uze ukhangele uhambo ofuna ukulurhoxisa
Cofa okanye chukumisa Bonisa iinkcukacha zohambo
Kushwankathelo cofa okanye chukumisa Bonisa iinkcukacha
Cofa okanye chukumisa Tshintsha okanye rhoxa
Phantsi koRhoxisa ukubhukisha, cofa okanye uchukumise Okulandelayo
Khetha iCOVID-19 (coronavirus) njengesizathu sokurhoxa
Cofa okanye chukumisaCela ukubuyiselwa yonke imali
Umbuki zindwendwe uza kunikwa iiyure eziyi-48 ukuba aphendule ukuba ukubhukisha kwakho kuza kuqalisa kwisithuba seveki ezayo. Ukuba uyavuma ukuba urhoxe, siza kukubuyisela yonke imali kuquka nemali oyibhatalela ukusebenzisa uAirbnb, siyifake kwindlela yokubhatala obuyisebenzise ekuqaleni. Fumanisa okungakumbi ngendlela ebuyiselwa ngayo imali.
Ukuba umbuki zindwendwe akavumi, usenokurhoxa ibe ukubuyiswa kwemali yakho kuza kwenziwa kusetyenziswa ipolisi yokurhoxa eqhelekileyo yombuki zindwendwe.
Ezinye izinto onokuzikhetha
Ukuba ukubhukisha kwakho akufaneleki phantsi kwepolisi yeemeko ongenakuzinceda okanye ukuba umbuki zindwendwe wakho akavumi ukuba urhoxe, usenokumthumelela umyalezo umbuki zindwendwe ukuze ukhangele ukuba angavuma na ukukubuyisela imali eninzana xa nisebenzisa Iziko Lezemali.
Ukuba undwendwe lucela ukurhoxisa, uza kufumana i-imeyile ebuza ukuba uyavuma na ukubuyisela yonke imali. Ukuba ixesha lokungena liza kufika zingengakapheli iintsuku eziyi-7, uza kuba neeyure eziyi-24 zokuba uphendule, kungenjalo uza kuba neeyure eziyi-48 zokuba uphendule. Ukuze uphendule isicelo:
Kwi-imeyile, cofa indawo ethi Phendula undwendwe ibe uza kusiwa kuAirbnb
Cofa indawo ethi Buyisela yonke imali okanye ethiYala ukubuyisela imali
Ukuba uyavuma ukubuyisela yonke imali, akuzukuchaphazeleka ukuba yiSuperhost kwakho.
Ukuba ufuna ukurhoxisa ukubhukisha kwakho ngenxa yeCOVID-19 okungaqukwanga phantsi kwepolisi yethu yeemeko ongenakuzinceda, ungakwazi ukurhoxisa ukubhukisha, kodwa usenokohlwaywa.